Ny rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Terminal of Sale Terminal (POS / POS) | Avy amin'ny Linux
Ny rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Terminal of Sale Terminal (POS / POS)
Manome torohevitra foana izahay ho an'ireo mpampiasa birao an-trano. Na izany aza, Linux sy rindrambaiko maimaim-poana amin'ny ankapobeny koa dia be ny zavatra tokony hotohizina. mandray anjara eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra ny salantsalany izayAmin'ity lahatsoratra ity, miorina amin'ny famokarana voalohany Redeyegt, Asehoko anao ny sasany amin'ny ny fitaovana maimaimpoana tsara indrindra hampiasaina ao amin'ny terminal famarotana (POS / POS).
1 Inona ny POS / POS?
2 Nahoana no misy dikany ny fampiasana rindrambaiko POS?
Inona ny POS / POS?
POS, Ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy dia midika hoe "Point of Sale" (point of sale). pos amin'ny teny espaniola dia midika hoe "Point of Sale Terminal".
Noho izany, rindrambaiko iray ho an'ny POS no anaovana fifanakalozana sy fampahalalana momba ny fandoavan'ny mpanjifa amin'ny fividianana / fivarotana entana, vokatra ary serivisy. Ireo data ireo dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa. Amin'ny tranga misy antsika dia amin'ny alàlan'ny solosaina izany, fa azo atao ihany koa amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana vola, scanner barcode, pad pad ary mpamaky karatra.
Nahoana no misy dikany ny fampiasana rindrambaiko POS?
Betsaka ny antony mahatonga ny rafitra Point of Sale tsy ilaina amin'ny orinasam-pivarotana na fivarotana ambongadiny. Manampy ny tompona mitantana sy mandeha ho azy ireo inventories, fifanakalozana, tolotra (toy ny fihenam-bidy, tapakila ary manokana) ary manatsara ny fahombiazan'ny mpiasa, mamela azy ireo handany fotoana bebe kokoa hifaneraserana amin'ny mpanjifa.
Ho fanampin'izany, ireo rafitra ireo dia manome tatitra manan-danja, toy ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny asa, fampiasana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa hanampiana hiteraka orinasa bebe kokoa, hahafahan'ny tompona mifehy rehefa tsy eo izy, sns.
Ny Point of Sale dia misy singa isan-karazany, ao anatin'izany ny hardware, ny operating system, ny rindrambaiko sns. Ny ampahany lehibe dia ny rindrambaiko Point of Sale. Betsaka ny eny an-tsena, nefa lafo be izy ireo amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy, misy ihany koa ny sasany mora vidy na maimaim-poana saingy matetika dia ratsy be izy ireo ary miaraka amin'ny bug tsy misy farany na tsy mihazakazaka eo ambanin'ny Linux.
Na izany aza taorian'ny fikarohana kely nefa tsy misy dikany dia hitanay fa misy ny programa Point of Sale tsara indrindra ho an'ny GNU / Linux. Na dia mino aza ny sasany fa tsy misy rindrambaiko tsara ho an'ny tontolo ara-barotra izay mandeha eo ambanin'ny Linux, miala tsiny aho milaza fa diso kely ianao. Ka manoro hevitra anao aho fa hamorona ny sainao ary atsaharo ny fanapahana programa fisolokiana sy ny fampiasana rafitra miasa efa antitra (DOS).
POSper dia rafitra Point of Sale natao ho an'ny SME. Manolotra fanohanana amin'ny karazana fitaovana sy databata maro karazana. Izy ireo dia manolo-tena amin'ny fitsipiky ny vondrom-piarahamonina ary mandray tsara izay olona manaraka ireo làlana ireo. Izy io dia misy ny fanohanana amin'ny efijery, ny famolavolana ny varotra sy ny trano fisakafoanana mifantoka amin'ny mpampiasa, ny safidin'ny kara-mpanjifa, ny rafitra fihenam-bidy be pitsiny miaraka amin'ny tranokala misy ny vidiny ho an'ny mpanjifa, ny fanovana fihenam-bidy, ny hetra fifanakalozana, sns.
Voasary makirana dia lozisialy Point of Sale misokatra natao ho an'ny SMB. Mampiasa MySQL ho toy ny motera database ary azo ampiasaina amin'ny karazana client / server miaraka amin'ny database base sy terminal POS maromaro eo amin'ny tambajotra eo an-toerana. Lemon dia manome interface maoderina sy azo ovaina, tontonana fikarohana, fitaovana fanamarinana ny vidiny, fitaovana fitantanan-draharaha hitantanana ny orinasanay, tatitra momba ny pirinty, sns.
Misintona Lemon POS
POS Floreant dia rindrambaiko Point of Sale tsy miankina iray sehatra, natsangana tao amin'ny JAVA, miaraka amin'ny fanohanana ny efijery mikasika ny karazana sy ny haben'ny trano fisakafoanana rehetra. Izy io dia mahazaka menio fisakafoanana tsara, fandefasana, hetra, fihenam-bidy, fikolokoloana sakafo, tapakila an-dakozia, rafi-pitambarana ary tatitra momba ny varotra. Navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana MRPL izy io.
Sintomy ny Floreant POS
Libre POS dia mamela antsika hanana rafitra fivarotana fivarotana amin'ny fomba tsotra. Izy io dia manana lahasa marobe, manohana ireo mpanonta ESC / POS, mpijery mpanjifa ary mpamaky kaody. Ny programa dia azo ampiasaina amin'ny mpampiasa maro, samy manana ny alalàn'ny alàlana ao anatiny ao amin'ilay programa. Izy io koa dia ahafahantsika manova ny vokatra ary mampahafantatra anay ny varotra misy sary.
Ny rafitra dia natao iraisam-pirenena ary manohana ny Espaniôla, Anglisy, Alemanina, Portigey, Italiana, sns.
Ny famolavolana programa dia mitandrina mba afaka mifandray amin'ny efijery mikasika mora foana fa tsy mila fitendry na totozy. Ho an'ny trano fisakafoanana dia misy fiasa mahaliana toy ny fampisehoana ireo latabatra ao anaty bara miaraka amin'ny mombamomba azy ireo. Ny programa dia misy safidy ho fanidiana ny boaty, fitantanana ireo vokatra ary fandaminana azy ireo ho sokajy.
Azo alaina ho an'ny Windows, Mac, Solaris, ary Linux io.
Ampidino ny Librepos
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ny rindrambaiko maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Terminal of Sale Terminal (POS / POS)
117 hevitra, avelao ny anao
John ortiz dia hoy izy:
Azoko atao ny manome soso-kevitra amin'ny OpenBravo POS. Misaotra amin'ity lahatsoratra ity.
Valiny tamin'i John Ortiz
Jesus Benjamin Yam Aguilar dia hoy izy:
Salama, aiza no ahafahako mifandray aminao, hijerena ireo safidy novainao, raha afaka manompo anay izy io ary raha toa ka ara-barotra ny fanovana anao dia afaka mandoa anao izahay raha mila izany fiarahabana izany.
Valiny tamin'i Jesosy Benjamin Yam Aguilar
Rehefa avy nampiasa rindrambaiko maimaimpoana marobe ho an'ny teboka amidy aho dia nanapa-kevitra amin'ny iray karama ... ary ny marina dia nandeha tsara ho ahy izy io, raha liana ianao dia azoko omena anao ny anarany 🙂
Te hanana ilay anarana aho ary hahafantatra raha toa ka miasa amin'ny magazay kely izy io, te hanana fifehezana ireo vokatra amidy aho, fa mora kokoa amiko ny mitondra ny lisitra.
Luis Gonzalez dia hoy izy:
raha mahaliana ahy dia mba lazao ahy
Valiny tamin'i Luis Gonzalez
Salama, azafady mba omeo ahy ny anarana, liana aho
Hey, mba ampio aho amin'ny masiniko, tsy mivoaka intsony ny tapakila fivarotana, satria efa feno kaonty io, ary tsy haiko ny mamafa ny kaonty, fantatrao ve ny hamafa, olona afaka manampy ahy?
Izay milaza fa hamafa 🙂
brayan muriel dia hoy izy:
Miaraka amin'ireo rindranasa ireo, ny teboka amidy dia hanana fanamorana bebe kokoa amin'ny fitantanana ny varotra varotra amin'ny alàlan'ny tahiry mandroso amin'ireo programa ireo.
Mamaly an'i muri brayan
Salama, lahatsoratra tena tsara, mitady varotra maimaimpoana aho, ankoatry ny fikirakirana ny hetra amin'ny VAT, dia manao izany koa miaraka amin'ny iip, izay hetra araraotin'ny divay any Mexico, moa ve misy amin'ireto programa ireto mampiasa azy sa misy fantatrao?
Raspados Bannanas dia hoy izy:
Salama .. manana orinasan-tsorika aho ... mila amidy aho .. ahafahako mametraka ny vokatra isan-karazany .. ary manana safidin'ny mpanjifa matetika koa hanangona isa ho an'ny fividianana .. arahaba. amo@ssiete.com
Mamaly an'i Bannanas Raspados
PlataPOS dia hoy izy:
Azoko atao ny manome soso-kevitra amin'ny Plata POS ho an'ny Android
Maimaimpoana izy io, manana izay ilaina rehetra amidy izy. Tsy mila fitaovana, miasa amin'ny takelaka misy Android 2.3 na tsara kokoa. Maimaimpoana ny zava-drehetra.
Ny rafitra ho an'ny mpanjifa matetika dia ho hita amin'ity lohataona ity.
Azo sintonina amin'ny alàlan'ny Google Play
Mamaly an'i PlataPOS
Manoro hevitra ny Plata POS (POS) ho an'ny android aho.
Azo sintonina avy amin'ny Google Play izy io, miasa amin'ny smartphone na tablette rehetra amin'ny Android 2.3.3 na tsara kokoa.
Maimaimpoana, manana izay ilaina rehetra amidy ao amin'ny magazay izy ary amin'ity lohataona ity dia ho kinova ho an'ny mpanjifa matetika.
Neotecsoft dia hoy izy:
Izaho no CEO an'ny David an'ny NeoTEC Software, namorona POS ho an'ny linux antsoina hoe ALEXA_TPV sy AlexaGES izahay, tsy maintsy nataonay ho an'ny linux izany satria tsy te handoa ireo fahazoan-dàlana windows izy ireo. Miasa tsara, manavao hatrany.
Mamaly an'i Neotecsoft
Reykr dia hoy izy:
Pejy tena tsara. Mila fanampiana aho, manana orinasam-pisakafoanana izay anompoako ny mpanjifa mahazatra isan'andro (sakafo maraina, sakafo atoandro, ary amidiny zavatra toy ny zava-pisotro sy kojakoja momba ny fahadiovana manokana) ireo varotra ireo dia tsy maintsy tazonina ao anaty kahie isan'andro mba hamenoana ny kaonty tsirairay. amin'ny faran'ny volana, kaonty 300 eo ho eo, ary hahafahana manangona fa asa be dia be izany, mila programa iray ahafahako mamorona mpanjifa tsirairay, fa rehefa tonga izy mangataka serivisy dia tafiditra ao amin'ny rafitra izy amin'ny alàlan'ny kaody bar satria tsy maintsy ho haingana dia haingana izy, afaka omena vola be izy hahafahako mividy izay ilaiko, afaka manamarina ny fifandanjana sisa tavela ao amin'ny kaonty tsirairay aho hanitarana azy raha ilaina, mba hahafahako manamarina ny fanjifana isan'andro isaky ny kaonty raha ilaina ary afaka mamintina toy ny andro aho. Ny rafitra fiasako dia Windows. Misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisanao anjara, tsy azonao an-tsaina hoe mila mila rindrambaiko farafaharatsiny mitovy amin'izay ilaiko aho. Misaotra indray
Valiny tamin'i Reykr
Cristina Hernandez placeholder image dia hoy izy:
Azoko atao ny manome soso-kevitra ny VONUS no nampiasako tamin'ny orinasako ary nandeha tsara tamiko izany. Voaloa io, saingy mendrika ny fampiasam-bola.
Valiny tamin'i Cristina Hernandez
manaova tabilao amin'ny excel ary vita hatreo, ny vahaolana feno ho an'ny rafitra fananana ...
Mifandray dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, nampihatra ny rafitra fivarotana OpenBravoPOS any Mexico nandritra ny taona maro aho niaraka tamin'ny valiny tena tsara, novaiko ny kaody mampifanaraka azy amin'ny filan'ny mpanjifa mba hanamorana ny asany ary mahaliana ahy ny zavatra rehetra atolotry ny rindrambaiko maimaimpoana. antsika.
Flores Alemanina dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako mifandray?
Mamaly an'i Flores Alemanina
FOJOMOGO dia hoy izy:
Te hianatra hametraka an'ity aho amin'ny fomba ahafahako mifandray aminao
Valio amin'i FOJOMOGO
Ry namako, heveriko fa diso ianao, manana lakozia aho ary ny antony amidy dia LemonPOS mandritra ny roa taona mahery ary mandeha amin'ny fomba mandeha ny zava-drehetra,
hivarotra "x" vokatra "n" impiry dia mila manoratra fotsiny ianao ohatra 2x "ampidiro ny kaody vokatra" + Ampidiro ary dia izay.
momba izay hevitrao amin'ny ohatra nomen'ireo paleta, ohatra dia azonao atao izao manaraka izao:
paleta 1 kaody 1000
paleta 2 kaody 1001
paleta 3 kaody 1002
paleta 4 kaody 1004
Raha manana fetrany izy, saingy aleo tadidintsika fa ity rindrambaiko ity dia ankapobeny fa tsy rindrambaiko ampanjifaina amin'ny filanao, zavatra iray hafa manandanja miresaka momba ny lozisialy maimaim-poana dia na dia lisansa GPL na misy heverina ho maimaim-poana aza, dia mitombina tanteraka ny fanaovana azy. raharaham-barotra miaraka aminy, na i Richard Stallman aza mamporisika antsika hivarotra Rindrambaiko Maimaimpoana, raha ny manan-danja dia ny fandoavam-bola dia manana fahalalahana hiditra amin'ny kaody loharano isika ary hanova izay tsy tiantsika hatao, noho izany dia zava-dehibe ny mahatadidy ny Free Software ho Fahalalahana maneho hevitra fa tsy toy ny bar maimaim-poana, amin'izay dia hialantsika amin'ny fahalatsahana amin'ny finoana diso fa satria rindrambaiko Maimaimpoana io dia tsy maintsy maimaim-poana.
«Satria miresaka fahalalahana isika fa tsy ny vidiny dia tsy misy ny fifanoherana
ny sasany eo anelanelan'ny fivarotana kopia sy rindrambaiko maimaimpoana. Raha ny marina, ny
Zava-dehibe ny fahalalahana mivarotra kopia: fanangonana lozisialy maimaimpoana
amidy amin'ny endrika CD-ROM dia tena zava-dehibe amin'ny fiarahamonina
ary ny fivarotana azy ireo dia fomba iray hanangonana vola ho an'ny fampandrosoana
rindrambaiko maimaimpoana. »
Notsongaina tao amin'ny "Rindrambaiko Maimaimpoana ho an'ny Fikambanana Maimaimpoana" nataon'i Richard Stallman.
Na dia mbola tsy nanandrana ny Facturlinex aza aho dia hanandrana ihany koa hahitako ny fomba fiasany.
maria elena borges dia hoy izy:
Izy io dia teboka amidy hivarotana cookies sy zava-pisotro malefaka amin'ny lanjany, azo atao ny mividy azy io ary manana inventories
Mamaly an'i maria elena borges
tolak'andro tsara ny fanontaniana dia azo ovaina amin'ny ambaratonga
Pedro Infante dia hoy izy:
Aza very maina ny fotoananao, tsy misy ilana azy ny Lemonpos, na dia hanadihady ny wiki-dry zareo aza ianao, diso ny fomba hametrahana sy hanangonana azy ¨ sendra izany¨, vitako manokana ny nametraka azy io noho ny horonantsary izay ao amin'ny youtube http://www.youtube.com/watch?v=G0CPIA2Cl10 Noho ny gringo ¨POP¨ dia nataoko mihazakazaka ihany koa izy io, saingy mbola misy fetrany ihany, ohatra, raha te hivarotra vokatra 7 ianao dia tsy afaka manoratra mivantana ny habeny toy ny amin'ny POS rehetra, raha tsy izany dia mila manoratra ENTER ianao 7 heny ary eny diso ianao, mila mamafa ny tsipika iasanao ianao, tsy afaka mamorona lakile misy litera ho an'ny vokatra tsy mampiasa kaody bar ianao, isa fotsiny, ohatra:
raha manana karazana palety 8 samihafa aho ary tiako omena ny tsirairay ity kaody manaraka ity;
p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, TSY AZO atao ny mametraka ny litera P, (ary tsy io ihany no teboka fivarotana heverina fa maimaimpoana navoaka ho mandeha ary feno lesoka, izay mahaliana
raha mandoa ianao, toy ny amin'ny rindrambaiko tompona rehetra dia manitsy lesoka izy ireo ary manao modely manokana ho anao.
Vita tsy ho ela, raha mila rindrambaiko POS na POS tena izy ianao, dia iray ihany no miasa tanteraka, tsy misy hosoka, miaraka amin'ny fanohanana, ary havaozina tsy tapaka, tsy mitady tombom-barotra, izany hoe, tena maimaim-poana, jereo ny Facturlinex raha manaraka ny idealy izy ireo an'ireo izay mampiasa linux ... fahalalahana.
Mamaly an'i pedro infante
jacobo dia hoy izy:
Mamaly an'i jacobo
Salama, tsy isalasalana fa ny rindrambaiko farany tsara indrindra amin'ny fivarotana dia ny agora pos,
olona tena matihanina tena miorina amin'ny tsena ary amin'ny vidiny ambany dia ambany. tsy misy isalasalana fa ny vahaolana tsara indrindra hitako.
Valiny amin'i LEANDRO
Tpvcomercial-es Vicente Sánche dia hoy izy:
Mila maniry ny hanasarotra ny fiainanao mandritra ny € vitsivitsy ianao.
Raha mametraka fivarotana aho pos, Mieritreritra ny hivarotra sy hanome serivisy aho
Mamaly an'i Tpvcomercial-es Vicente Sánche
Mahaliana! Misaotra ny fizarana. Mamihina! Paul.
Rodolfo Jeronimo dia hoy izy:
Efa manana an'ity rindrambaiko ity ve ianao? Manana iray izay heveriko fa afaka manampy anao, ... rieronimos@gmail.com ,
Valiny tamin'i Rodolfo Jeronimo
Salama! mirary alina, te-haka POS ho an'ny mpanao volo aho, fantatrao ve hoe iza no mety? misaotra joana
Valiny tamin'i Joana
Misy mahalala ve raha miasa na manandramana ny rafitry ny mpanjifa posper, raha toa ka mahangona teboka, toy ny ataon'i soriana, satria ny mpanjifa dia mitaky an'io fampiasa io fa amin'ny openbravo dia toa tsy misy fampiasa toy izany, arahabaina
Nicolas Cañellas dia hoy izy:
namana miditra tsara. Tena nanome topy maso ahy tsara izany satria mila rindrambaiko toy izany aho. Iza amin'izy ireo no manana fampiasa tsara kokoa miaraka amin'ny mpanonta ara-bola? Avy any Arzantina aho. misaotra! bilaogy tsara.
Valiny tamin'i Nicolas Cañellas
Misaotra anao, Nico!
Mazava ho azy, raha mijery ny fivarotana openbravo ianao, dia manohana ireo fiasa izay ahafahanao mametraka data toy ny habe, modely ary loko handaminana ny angon-drakitrao avy eo na hanantona data misimisy kokoa momba an'io vokatra io. Nampiharinay tamin'ny fomba mahomby tamin'ny minisiter vitsivitsy eto ary mandeha tsara izany. Azonao atao koa ny manampy ny sarin'ny vokatra hitadiavana azy mora kokoa
Salama namana Jesosy, fisalasalana, nanandrana nanamboatra amina mpanonta printy EC5890 4x aho, saingy manonta sombin-javatra banga amin'ny voalohany amin'ny kasety 5 na XNUMX cmt ary avy eo manonta ny tapakila, misy tohana amin'ny fanontana ve? mahafaly
Salama, liana amin'ny serivisinao aho. Ao amin'ny Mty aho. Salama.
Misy mahalala ve raha misy amin'izy ireo mitana habe sy loko? [Manontany tena aho raha mahomby amin'ny fivarotana fitafiana]
Uhhhh, tsara ho an'ny orinasa kely, raha tsy maintsy mividy karazana malemy amin'ity karazana ity ianao dia mivoaka ……. SALADITO.
Data tsara 🙂
Marina izany ... mivoaka masira ...
SEO vaovao dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, Restaurant Point of sale POS
Valio ny Newemage SEO
Fampahalalana sarobidy Pablo. Misaotra ny fizarana.
ilay tokana dia hoy izy:
misaotra ilaiko io.
Valio ilay iray
Faly aho fa nanampy ahy! Mihobia! Paul.
Fahafinaretana! Salama. Paul.
Daniel Luna dia hoy izy:
Ampitao amiko ny anarana hoe liana aho.
Valiny tamin'i Daniel Luna
Perrot dia hoy izy:
Mety ilaina ve izany ho an'ny fivarotam-panafody izay manana programa Win XP miaraka amin'ny mpamaky bara sy ny rafitra fanaraha-maso ary ny faktiora?
Mamaly an'i Perrot
Carter dia hoy izy:
http://www.johnertec.com/ manana rindrambaiko fivarotana ho an'ny orinasanao, orinasa na orinasanao. mitantana vokatra isan-karazany sy ny zavatra rehetra
Mamaly an'i carter
Iray amin'ireo pejy niasa nahagaga ahy ihany koa ny XpendMe, rindrambaiko fampiasa amin'ny varotra an-tserasera mifanaraka amin'ny fitaovana finday sy ny rafitra miasa io.
Aza adino ny mametraka rindrambaiko sarotra sy mandany ora amin'ny telefaona miaraka amin'ny fanampiana ara-teknika. Ataon'izy ireo ho anao izany rehetra izany.
Ny pejy ofisialy; http://xpend.me/
karlangas dia hoy izy:
Misy loharano misokatra ve amin'ireo rindrambaiko ireo?
Mamaly an'i karlangas
Ny olon-drehetra ...
Gabriela gonzalez dia hoy izy:
Salama, salama maraina, te-hahazo vaovao momba ny programa tsy maintsy hitantanana orinasa kely aho, manana mpanam-bolo iray izay anolorako tolotra ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ary mila mifehy an'ireo serivisy ireo aho. Tsy haiko raha manana zavatra ilaina amin'ny filàna ireo. Ary koa hoe mifanaraka amin'ny fanomezana tapakila.
Valiny tamin'i Gabriela González
FERNANDO RIESCO dia hoy izy:
Mpanafatra POS touch aho, nampidina ny programa nataonao aho, saingy mampahafantatra ahy izany fa misy javaw rakitra tsy hita
Valio amin'i FERNANDO RIESCO
jesoa cano dia hoy izy:
ahoana no ahafahako mametraka POSper satria vaovao amin'ny linux aho. Misaotra betsaka.
Mamaly an'i Jesosy cano
santiago salgado dia hoy izy:
Mila rindrambaiko ahafahako mifehy ny tolotra, fihenam-bidy amin'ny entana amin'ny daty sasany.
Mamaly an'i santiago salgado
Jose tapia dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara, ezahiko ny farany hahitana ny fomba fiasany, misaotra betsaka anao nizara an'ity vaovao ity 🙂
Valiny tamin'i Jose Tapia
Sandra Forero dia hoy izy:
Nividy ilay rindrambaiko tamina Meksikana iray aho, ankehitriny dia manome ahy olana izy hiditra amin'ireo vokatra ary indrisy fa tsy manome ahy fanampiana ara-teknika ilaina izy ireo. Tsy manoro izany aho
Valiny tamin'i Sandra Forero
Iza amin'izy ireo no tsara na farafaharatsiny azo ampitahaina amin'ny Factusol?
hanin-kotrana dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara. Saingy raha ny tokony ho izy, na dia ankehitriny aza, ny ankamaroan'ireo rindrambaiko ireo dia tsy misy ilana azy (ary fantatr'Andriamanitra fa nanandrana ny ankamaroan'izy ireo aho).
Tsy haiko raha tena ilaina tokoa ny manome soso-kevitra ny sasany amin'ireo nampiasako, mbola hataoko ihany koa manantena fa hisy hahita ilay fampahalalana ilaina: Niara-niasa tamin'ny 123 POS aho, nilaza izy ireo fa manana kinova maimaimpoana, saingy tena fototr'izany, noho izany fantatro ihany fa lafo loatra raha te hanana endri-javatra bebe kokoa ianao. Nampiasa ny Microtexne Delta 5 ihany koa aho, izay misy kinova fototra sy feno na dia samy andoavam-bola aza. Na eo aza ireo rehetra izay nohamariniko, maimaim-poana ary naloa, dia nitahiry ny kinova fototra aho, ity farany ity, satria mifanaraka tsara amin'ny kaontiko ampiasaiko.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia manoratra.
Mamaly ny Pulse
Magnabyte dia hoy izy:
Ao amin'ny MAGNABYTE dia miatrika teboka amidy amin'ny vidiny mirary sy kalitao tena faran'izay tsara.
Manasa anao izahay hihaona aminay, http://www.magnabyte.com.mx
Mamaly an'i Magnabyte
Edgard fv. dia hoy izy:
Fanampiana lehibe ho antsika izay tsy miraharaha ny rafitry ny POS, heveriko fa fanampiana tena mahafinaritra izany ho takalon'ny inona na inona misaotra anao Andriamanitra mivarotra anao.
Mamaly an'i Edgard fv.
Te-hahafantatra momba ny fandaharam-pivarotana toerana ahatongavan'ilay fidirana ao amin'ny vokatra aho
Johanna dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha misy programa afovoany misahana ny POS? Aiza ny fanaraha-maso ny fandefasana entana, ny fanisana, ny kaonty azo aloa ary ny trosa?
Valio i Johanna
Ahoana no fomba hifandraisako aminao?
Samantha smith dia hoy izy:
Ireo rafi-rindrambaiko ireo ary ny fitaovana sasany dia natao ho an'ny filan'ny mpanjifa, noho io antony io dia ilaina ny manavaka izay ilaina ho antsika, miaraka amin'ny safidy tsara ihany koa ny fanatsarana ny asan'ny orinasanay dia hita taratra amin'ireo mari-pamantarana ny vokatra.
Valiny tamin'i Samantha Smith
Ida G dia hoy izy:
Manoro azy ireo aho http://www.bloomforth.com, Mipetraka any Etazonia aho ka amin'ny teny Anglisy ilay pejy fa mety tena ilaina tokoa satria misy programa fandaharam-pivarotana, fitantanana lisitra ary fanaraha-maso ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa. Maimaimpoana izany raha toa ka manana mpiasa latsaky ny dimy ianao ary 6 no miakatra dia manana vidiny ambany dia ambany raha oharina amin'ireo programa hafa. Tsy misy programa alaina. Tapakam-barotra amidy rahona io.
Valiny tamin'i Ida G
Peri dia hoy izy:
Mamaly an'i Peri
Fantatrao ve misy rindrambaiko POS izay azo ovaina mora foana ny faktiora vola isam-bolana?
Salama, manana dadatoako aho izay mampiasa rindrambaiko maimaimpoana an-tserasera, ny zavatra tsara dia azonao ampiasaina amin'ny PC rehetra, nampiasaiko ihany koa izany rehefa mandeha manampy azy aho ary mora ampiasaina. Ny pejy dia http://www.almacen.cl
misy rindrambaiko point of sale maimaimpoana ve hitantanana fivarotam-panafody?
Mila tolo-kevitra tsara aho, misaotra
Rosario Garza dia hoy izy:
Manana vonus aho, ary mahomby ny asany,… manana fivarotana kilalao aho, nefa mieritreritra aho fa afaka manampy anao koa izany…
Valiny tamin'i Rosario Garza
Izaho koa nahita programa vaovao miaraka amina fivoarana tena matihanina mety hahaliana anao, efa nanandrana aho ary tena nahagaga ahy izany satria miasa amin'ny fitaovana rehetra hitantanana ny varotra miaraka amin'ny dikan'ny hoe mitahiry amin'ny fividianana fitaovana lafo vidy sy ny terminal famarotana. . ny tranonkala dia:
LtV dia hoy izy:
Nanandrana ireo tao amin'ity lisitra ity aho ary nanokana ny lafiny fivarotana posterita sy php satria takiko fa amin'ny alàlan'ny tranonkala ny interface ary afaka miditra amin'ny tatitra nefa tsy ao amin'ny sampana.
Tamin'ny farany dia nampiasa Vonus aho ary tena niasa tsara. Tsy maimaim-poana izany fa ny vidiny dia ambany dia ambany ary manana fampiasa be dia be izy io. Hitako daholo ny zava-drehetra avy amin'ny takelaka 🙂
Mamaly an'i LtV
Kadinika momba ny rindrambaiko dia hoy izy:
Manoro hevitra rindrambaiko teboka telo hafa momba ny varotra aho:
Ny faharoa dia rindrambaiko maimaimpoana nefa ara-barotra.
Valio ny Lse Software Consulting
Salama, azoko atao ny manome soso-kevitra ny rindrambaiko point of sale SICAR, io no iray amin'ireo tsara indrindra manerana ny firenena ary manana torohevitra tsara indrindra azonao atao any Mexico ho an'ny rafitra iray.
saul humberto aguilar dia hoy izy:
Izaho dia mpamily taxi ao mexicali bc afaka mividy POS aho ary misoratra anarana amin'ny banky ary tsy mila mandoa azy ireo isam-bolana ho an'ny Dial ny serivisy tiako hananana ny terminal-ko efa manana terminal aho fa te hanana ny ahy manokana Mia
Mamaly an'i saul humberto aguilar
Saola POS dia mifehy ny varotra, ny mpanjifa sns, azoko tsara fa ny tianao holazaina dia ny POS handoavana karatra? raha eny, ny fanangonana komisiona sy ny fampiasana dia an'ny banky irery, ny azonao atao dia ny manadihady ny tetikasan'ny komisiona amin'ny banky hafa ary manova.
Rebecca dia hoy izy:
Fantatro ny rindrambaiko fivarotana tena tsara, ny marina dia mahatonga ahy ho tsara indrindra amin'ny karazany io. ecaja no iantsoana azy avy amin'ny ecaja.com.mx
Valiny tamin'i Rebeka
Sintic Bolivia dia hoy izy:
Ry namako, efa namorona vahaolana roa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao aho.
Ny voalohany dia novolavolaina ho an'ny birao miaraka amin'ny mono .net ary mifehy ny fanatobiana entana, ny fividianana, ny varotra, ny mpanjifa, ny vokatra, ny mpamatsy, ny barcode generator, ny fanaovana pirinty ny tatitra, ny fanontana ny lisitra misy ny barcode.
Ny faharoa dia teboka iray amidy amin'ny haitao rahona ary ampidirina amin'ny woocommerce, vahaolana amin'ny varotra elektronika ho an'ny WordPress.
Ireo vahaolana roa ireo dia ny cross-platform, linux, windows, macosx.
Raha liana ianao dia azonao atao ny mifandray amiko fa modular tanteraka izy ireo ary azo ampifanarahana amin'ny filanao amin'ny alàlan'ny famolavolana modules manokana.
Valiny tamin'i Sintic Bolivia
alejandro camacho perez dia hoy izy:
Miasa amin'ny POS miaraka amina keyboard misokatra ve ny programa?
Mamaly an'i alejandro camacho perez
Marina izany, miasa amin'ny kitendry misokatra izy io.
Miasa amin'ny POS miaraka amin'ny klavier misokatra ve izany?
matias garcia dia hoy izy:
Mila manonta tapakila ho an'ny toerako aho, ahoana no fomba hifandraisako aminao hahitanao hoe inona ilay rindrambaiko?
Mamaly an'i matias garcia
Marcelo aviles dia hoy izy:
Manana rafitra mandroso post aho raha mahaliana anao dia afaka mifandray amiko amin'ny tranokala ianao
Valiny tamin'i Marcelo Aviles
Eduardo Obando dia hoy izy:
Salama… Manomboka orinasa mpanatitra sakafo aho… ary mila posa miasa aho ary tsy dia sarotra loatra… antenaina fa maimaim-poana.
Valiny tamin'i Eduardo Obando
Safidy iray hafa ho an'ny SME dia Saas ao amin'ny Cloud antsoina hoe Vonus, mampiasa metrônika izy ireo ary mamaly izay mamela ny mpampiasa hanana rafitra mora ampiasaina, avy amin'ny fitaovana rehetra, na PC, Laptop, Tablet, Smartphone. Misy fahazoan-dàlana 100% maimaim-poana ary tsy mila mampidina na inona na inona mihitsy ianao,… .mivoaka fotsiny ianao ary miditra toa ny kaonty Facebook.
Juan Alberto Gomez dia hoy izy:
Manoro hevitra aho http://www.eleventa.comNa dia tsy mahazatra an'ny Linux aza izy io, dia miasa miaraka amin'ny divay, mora be ampiasaina ary ambonin'izany rehetra izany dia feno sy amin'ny vidiny mora azo.
Valiny tamin'i Juan Alberto Gómez
Luis Garza dia hoy izy:
Manana ny varotra aho, saingy efa tonta io, rindrambaiko namboarina 10 taona mahery lasa izay izy ireo ary tsy manana fampiasa amin'izao fotoana izao, na ny Neny aza nampiasa izany ary tena sarotra ny manodinkodina.
Valiny tamin'i Luis Garza
REYNALDO CRUZ dia hoy izy:
MAZAVA MAZAVA ARY MAZAVA NY FANAZAVANA, VAOVAO IZAO TAMIN'NY TANINDRAZANA FA MANANA BUSINESS amin'ny serivisy ho an'ny trano fisakafoanana sy ny tantaram-piainana. TEHIBE IANAO MIANATRA hiasa sy hampiroborobo ny POS. MANKASITRAKA, RAHA MBOLA MANANA FAMPIANARANA, TIANAO Hahalala anao aho.
Valio amin'i REYNALDO CRUZ
Napetrakay tamin'ity taona 2015 ity ny Odoo (OpenERP 8), mbola mampahafantatra ny tenany aminy ihany isika, saingy amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara izany. Izy io dia miasa amin'ny rahona (azo apetraka eo an-toerana ihany koa izy io) ary mifangaro tsara amin'ny suite an'ny Google apps. Ny POS rehetra dia tsy mendrika anay noho ny antony fanatanterahana ny fanarahana làlana (fametrahana lalàna amin'ny fivarotana sy orinasa misy vokatra voajanahary) ankoatry ny fitantanana fivarotana ara-batana dia tsy maintsy nitantana fivarotana an-tserasera sy fitantanana kaoperativa iray. Ho an'ny varotra tsotra dia mety be loatra izany, fa raha mila zavatra hafa ianao dia safidy tena tsara izany.
Hevitra iray manan-danja. Maimaimpoana sy malalaka dia tsy midika hoe altruistic. Ny tiako holazaina dia amin'ny tranga maro, ary Odoo dia iray amin'izany, ny fampifanarahana sy ny fametrahana ny programa dia mety ho sarotra ka mila ny fanampian'ny mpiara-miasa, teknisianina iray, hampianatra antsika sy hanomana azy ary handany vola izany, izay Mitsitsy vola amin'ny vidin'ny programa izahay, izay tsy dia kely akory, ary ny tsy tratran'ny orinasa iray, raha rahampitso dia avelan'ny mpiara-miasa aminy isika, afaka mivadika amin'ny hafa isika na mamorona azy ho antsika.
Manoro hevitra aho POS Stratus, miasa amin'ny fitaovana rehetra izy io ary manana volana fitsapana izy ireo.
Te ho liana amin'ny trano fisakafoanana POS aho
MiEX dia hoy izy:
Safidy tsara izy ireo, ny lohahevitra dia ny fikirakira marina ho an'ny fiasan'ny mety.
Valiny amin'ny MiEX
Maria urquidi dia hoy izy:
Iza no afaka manome ahy vaovao momba ny vidin'ny rindrambaiko ???
Valiny tamin'i Maria Urquidi
BERNY UMANA GOZALES dia hoy izy:
Salama, tiako ity lahatsoratra ity, tsara ny mahafantatra fa tsy ilaina ny mampiditra vola amin'ny rindrambaiko karama satria misy ny fahatsiarovan-tena amin'ny fampiasana maimaim-poana, misaotra ny lahatsoratrao, tena tsara izany.
Valiny amin'i BERNY UMANA GOZALES
David Utrero dia hoy izy:
Mety amin'ny orinasa fanamboarana ve ity rindrambaiko ity? Izaho dia mitady iray izay ahafahako mametraka ireo singa amin'ny fanamboarana izay nalaina tao amin'ny trano fitehirizana ary alaina avy amin'ny tahiry, ankoatry ny zavatra lojika hafa amin'ny POS rehetra.
Valiny tamin'i David Utrero
josu dia hoy izy:
Manana atrikasa aho, ka mila ilay programa, maimaimpoana na karama, hifehezana ny mpanjifa, miaraka amin'ny baikon'izy ireo, miaraka amin'ny sary tsara kokoa, fifehezana ny fivoahana sy ny fidirana, ary ny mahazatra, ny tahan'ny faktiora, ny tahiry sns.
Mamaly an'i josu
Vick dia hoy izy:
Valio amin'i vick
Alexia dia hoy izy:
Mila zavatra toa ilay voalaza etsy ambony POS misy boaty fitahirizam-bokatra fanaraha-maso sy ny zava-drehetra aho fa ny misintona azy amin'ny iOS plisssss
Valiny tamin'i Alexia
Salama maraina, raha mandinika ireo safidy malalaka tsy hitanao izay tianao ianao dia afaka manoro anao aho http://www.easyprocess-pos.com satria intuitive sy mora ampiasaina izy dia aloa fa tena tsy mandany vola firy.
Manantena aho fa mahasoa anao izany, arahaba
Sofia M dia hoy izy:
Tokony hampiasa VonusPOS izy ireo dia rindrambaiko SaaS, tena tany am-boalohany ary ao anaty rahona tanteraka! ary tsy mila fampiasam-bola lehibe amin'ny fitaovana lafo vidy ianao, ampiasaiko amin'ny asako io ary niasa tsara ho ahy izy, omeko anao izany 😉
Valiny tamin'i Sofia M
Vonus POS dia hoy izy:
Misaotra Sofia M tamin'ny fanovozan-kevitra! Mihoatra ny teboka fivarotana ao anaty rahona, ny lozisialy dia mampiditra asa ho an'ny fitantanan-draharaha. Miaraka amin'ny VonusPOS, ireo mpandraharaha dia afaka mahita ny tatitra momba ny varotra, mifehy ny zavatra noforoniny ary manao fanadihadiana ara-bola avy amin'ny Smart Phone. Tsy avelanao ankilabao ireo mpilalao fototra amin'ny orinasa rehetra: NY CLIENTS. Ao amin'ny VonusPOS dia asaintsika ny mpandraharaha madinidinika sy antonony handray anjara toa ny Orinasa lehibe amin'ny fizotrany ny mpanjifany mihinana indray, izany no antony nampidirinay ny Loyalty Platform matanjaka ho an'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa.
Valio amin'i Vonus POS
Tena tsara ilay lahatsoratra, tsy maintsy tadidintsika fa misy ankehitriny ihany koa ireo rafitra pos ao amin'ny rahona
Mamporisika ireo zavatra noforoniko aho
Lahatsoratra tsara, tiako ny hanomezana POS maimaimpoana ho an'ny fivarotana fitaovam-pitaterana.
Monica mendoza dia hoy izy:
Salama, ny orinasako kely koa dia namorona POS maimaim-poana sy an-tserasera. Izy io dia tonga lafatra toy ny POS ho an'ny fivarotana akanjo na fivarotana kafe. Azon'izy ireo ampiasaina amin'ny finday, tablette na PC izany.
Nanangana azy io tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana izahay, toy ny mariadb sy php. Izy io dia manana ny mampiavaka azy noforoninay mba hampiroboroboana fiaraha-monina openource toy ny opencart.
Valiny tamin'i Monica Mendoza
Salama, ny orinasako madinidinika dia nivoatra a pos maimaim-poana sy an-tserasera. Izy io dia tonga lafatra toy ny POS ho an'ny fivarotana akanjo na fivarotana kafe. Azon'izy ireo ampiasaina amin'ny finday, tablette na PC izany.
P.S. Naveriko indray ny hevitra satria hadinoko ny nametraka ilay rohy. Misaotra anao.
Raul ramirez dia hoy izy:
Salama, salama maraina, voalohany indrindra, misaotra anao tamin'ity lahatsoratra ity sy ilay namorona ny bilaogy, nanampy ahy be dia be izany rehefa nisafidy POS, hatrany am-piandohana dia sarotra izany noho ny tsy fahampian'ny fahalalana eo amin'ny haitao sy ireo fotoana I teo am-pitadiavana tao an-tanànako dia nampiseho fahagagana an'arivony tamiko izy ireo noho ny faniriany hividy ilay rindrambaiko ankoatry ny vidiny lafo be toa hitako fa somary lany andro ny rafitra toa ny windows 98
Fa ny fikarohana Internet sy ny tsena filalaovana dia hitako izay azoko andramana ary tiako be dia be ary isaky ny mianatra bebe kokoa momba an'ity POS finday ity aho, dia raiki-pitia bebe kokoa, tsy mila miatrika olana be loatra toa ahy novakiako tamin'ny forum sasany fa tsy mamaly na mihantona tsara ny rindrambaiko tsy dia fantatro loatra ny atao hoe rahona fa mety tsara ho ahy ilay rindrambaiko. Ankoatr'izay dia manome menio elektronika izay manintona ahy indrindra aho, manana rindranasa ho ahy koa aho hahitako ny fizotrako rehetra. https://smarttouchpos.com.pe/ Angamba mety hanampy anao amin'ny zavatra iray izany.
Valiny tamin'i Raul Ramirez
Pedro Llorente dia hoy izy:
Tena sarobidy tamiko ity lahatsoratra ity, nitady karazana rindrambaiko toy izao aho, misaotra betsaka
Valiny tamin'i Pedro Llorente
Misy teboka fivarotana faran'izay tsotra izay eo am-pandrosoana tsy tapaka, antsoina hoe Troka Point of Sale. Miasa amin'ny Android izy io ary alaina maimaim-poana amin'ny Google Play, tsy misy doka izany. Ampiasaiko amin'ny mpanao volo roa ananako io ary hitako mivantana ny fiampangana azy tsirairay, nefa tsy eo aho. Niasa tsara ho ahy izany.
Salama tsy tpv maimaim-poana 123 http://www.tpvgratuito.comManana karazana orinasa maromaro izy io, ohatra, manana ny faktiora aho.
Mampifanaraka azy ireo tsy tapaka izy ireo, ary ny tolo-kevitra dia dinihina ary ampidirina amin'ny fanavaozana izay ataony isam-bolana.
Manoro izany aho
Tom dia hoy izy:
Aza mandainga, tsy maimaim-poana izany ary ho an'ny win2
njmube dia hoy izy:
Safidy izay havaozina hamoaka ny Invoice Elektronika amin'ny kinova 3.3 dia Multicomercio Point of Sale, safidy matanjaka sy mora ampiasaina.
Mamaly an'i njmube
Sandrine dia hoy izy:
Salama tompoko / Ramatoa
Ho an'ny filanao findramam-bola maika rehetra, hanatanterahana tetik'asa manokana, manolotra anao izahay amin'ny Internet - Trosa arahin'antoka - findramam-bola manokana - fampindramam-bola ara-bola - indram-bola arahin'antoka, izay misy tombony ho anao. Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Valiny tamin'i Sandrine
counter0219 dia hoy izy:
Ny mpandraharaha rehetra dia miankina amin'ny kaonty, fa amin'ny maha tompona orinasa azy, dia tsy maintsy manana fidirana mivantana amin'ny mombamomba ny orinasany izy rehefa mila izany ary tsy misy fetran'ny karazana. https://www.excel-accounting-budget-analysis.com , fitaovana azonao ianteherana hanatsorana, amin'ny vidiny mirary, ny karazan-kaonty amin'ny kaonty rehetra.
Jien kuntent ħafna llum li rċivejt is-self tiegħi minn sellief ġenju, irrid nirringrazzja lil Alla talli tani l-opportunityità li nirċievi self mal-kumpanija tas-self tas-Sur, Richard mills. Raha misy ny tenanao manokana, dia tena ilaina ny mampiasa Internet mba hanampiana ny tenanao hanao asa-tanana. Kien il-ġimgħa li għaddiet ilu fine lill-kumpanija ta 'self Jeffrey Raymond illum kuntenta li rċevejt is-self bindgħi b'suċċess. Nirringrazzja lil Alla li ma tliftx dak li nħallas. Hawn taħt hemm indirizz biex tikkuntattjahom ibgħat email lil min irċieva s-self tiegħek.
Laptop Laptop Dell Vostro V131
Maninona no nividy Motorola i Google